Yemen: Qaramada Midoobay Oo Taageertay Qorshe Xuutiyiintu Soo Bandhigeen – somalilandtoday.com
Yemen: Qaramada Midoobay Oo Taageertay Qorshe Xuutiyiintu Soo Bandhigeen
(SLT-Washington)-Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweeyey qorshe nabadeed oo ay soo bandhigeen fallaagada Xuutiyiinta Yemeneed ee Iran taageerto, kaas oo ah in ay joojinayaan weerarrada ay ku hayaan Sucuudiga.
Qorshahan Xuutiyiintu wuxu soo baxay toddobaad uun ka dib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo lagu weeraray ceelasha saliidda Sucuudiga ee Abqiiq iyo Khurays.
Dagaalka sokeeye ee Yemen ka socda waxa ku dhintay 10,000 oo malaayiin qof oo kalena macaluul ayuu qarka u saaray, arintaas oo lagu tilmaamay duruuftii ugu xumayd ee dad samee ah eek u habsata.
Hadal laga sii daayey Telefishanka ayaa gudoomiyaha Golaha Sare ee Siyaasadda Xuutiyiinta, Mahdi Al-Mashat, waxa uu ku sheegay in ururku diyaar u yahay inuu joojiy dhamaan weerarada uu ku hayo Sucuudiga haidii boqortooyadu iyadna sidoo kale yeelayso.
“Ergeyga gaarka ahi waxa uu ku nuuxnuuxsanayaa muhiimadda ay leedahay in laga faa’iidayso fursadan oo hore loo falo waxyaabaha aan laga maarmayn ee lagu joojin karo colaadda, laba kaclaynta dagaalka iyo hadal tirada aan wax tarka lahayn” ayaa lagu yidhi warbixin ka soo baxday xafiiskiisiisa.
Shiinaha Iyo Taiwan Oo Khilaafkooda Gaadhay Heer La Isku Gacan Qaaday
Xiisadaha muddada dheer ka dhex taagnaa Shiinaha iyo Taiwan ayaa Sababay in diblomaasiyiintooda uu gacan qaad...
Ilwad Elman Oo Ku Guulleysatay Abaal-marin Caalami Ah
Ilwad Elman oo si weyn ugu ololeyso nabadda ayaa ku guuleysatay Abaal-marinta ugu sarreysa qaaradda Afrika...